ZEUS Myanmar – Page 2
I know what you did in the last summer  Review
No Comments on I know what you did in the last summer  Review
I know what you did in the last summer လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တင် 20s Horror movies fans တွေအနေနဲ့ မသိသူမရှိလောက်ဘူးလို့ ပြောလို့ရမှာပါပဲ။ ကိုယ်လည်းငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တာ။ Remake ပြန်လုပ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းအများကြီး ရှိခဲ့သလိုပဲ Teenage Horror Films တွေထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားကလည်း အတော်အသင့် နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
1997 ခုနှစ်မှာကတည်းက 1973 ခုနှစ်မှာနာမည်အရမ်းကြီးခဲ့တဲ့ ဝတ္တုကိုပြန်ရိုက်ပြီးနာမည်ရခဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ အဲ့ဒါကိုပဲ 2016 မှာပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် Low Budget Movie လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ Fail တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်လည်း Original Movie ကိုအကြိုက်ဆုံးပါ သူ့နောက်ကထွက်တဲ့ Squeal တွေကိုလည်းသဘောမကျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Remake Series တွေပြန်လုပ်တာများတဲ့ 2021 မှာ Chucky Series ပါထွက်ခဲ့ရုံသာမကပဲ ကိုယ်အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ I know what you did in last summer ကလည်း Series အနေနဲ့ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၈ ပိုင်းပါဝင်ပြီး Teenage Horror films တွေလိုမျိုး အနှစ်သာရ အပြည့်အဝနဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။
လန်နွန်နဲ့ အယ်လီဆင်ဆိုတဲ့ အမွှာလေးနှစ်ယောက်က တကယ့်ကိုရုပ်တူပြီး ဘယ်လိုမှခွဲမရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ Personality တွေကတော့ကွဲပြားပါတယ်။ လန်နွန်က တကယ့်ကို Bitchy ကျပြီး စားစော်ကြီး လိုက်လုပ်နေတဲ့သူပါ။ သူမရဲ့ Depression တွေကို ပြေပျောက်အောင် လုပ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ညီမ အယ်လီဆင်နာမည်နဲ့ Only Fans ဖွင့်ပြီးပိုက်ဆံရှာရတဲ့အထိ အောက်တန်းကျပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူတွေရဲ သဘောတရားအရ အဲ့လို Bitchy ကျတဲ့လူတွေကိုမှ ပေါင်းချင်တာတို့ အားကျတာတို့ သဘောကျတာတို့လည်းရှိပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် လန်နွန်က အက်လီဆင်ထက်ပိုပြီး သူငယ်ချင်းလည်း ပိုများသလို ချစ်ခင်တဲ့သူလည်းများပါတယ်။ အယ်လီဆင်ကတော့ အပယ်ခံလေးပေါ့။ ဘယ်သူမှလည်း အပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်တဲ့အပယ်ခံလေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အယ်လီဆင်ကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကချစ်တဲ့ ဒီလန်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကလည်း သူမအတွက် Virginity ကိုသိမ်းထားရလောက်တဲ့အထိချစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လန်နွန်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မက်ဂေါ့ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အထက်တန်းပြီးလို့ ပါတီလုပ်တဲ့ညမှာ လန်နွန်က ဒီလန်ရဲ့ Virginity ကိုယူလိုက်လို့ လန်နွန်နဲ့ အက်ဒီဆင်တို့ နှစ်ယောက်စကားများကြပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ပဲ အက်ဒီဆင်ကလည်း စိတ်တိုပြီး လန်နွန်အနွေးထည်ဝတ်ပြီး လန်နွန်ကားပေါ်သွားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာပဲ လန်နွန်သူငယ်ချင်းတွေရောက်လာပြီး သူမကိုလန်နွန်အထင်နဲ့ တနေရာကိုသွားဖို့ ကားနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာပဲ လမ်းမတစ်နေရာမှာဘယ်ကမှန်းမသိပေါ်လာတဲ့ လန်နွန်က သူမတို့ကားရှေ့ရောက်လာခဲ့ပြီး အက်ဒီဆင်ကလည်း အရှိန်မလျော့ပဲ တိုက်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ လန်နွန်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သေသွားတဲ့သူက အယ်လီဆင်ပဲလို့ထင်ကြပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ပဲ ကမ်းခြေနားက ဂူတစ်ခုထဲမှာ သူတို့သူငယ်ချင်း ၆ ယောက်အလောင်းကိုဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တနှစ်ကြာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူတို့လုပ်နေတာတွေကိုသိတဲ့ သူတစ်ယောက်က သူ့တို့ဆီကိုစပြီး မက်ဆေ့တွေပို့ပြီး လူတွေလိုက်သတ်နေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြီးတစ်ယောက်အသတ်ခံနေရတဲ့ အချိန်မှာပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ နဲ့ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေထဲက တယောက်ကပဲ လိုက်သတ်နေတာလား ဆိုတာကို ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Review ( Spoiler Alert)
ဒီဇာတ်ကားကို စကြည့်ကတည်းက Expectation တွေဘာမှမထားပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲကြည့်ခဲ့တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေရဲ့ Remake/ Reboot တော်တော်များများက Fail ကျတာများလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Episode အစကနေအလယ်လောက်ထိ တော်တော်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဆွဲဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Plot Twist တွေလည်းများသလို ဘယ်သူက လူတွေသတ်နေတာလည်းဆိုတာ လုံးဝခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ရှု့ထောင်တွေကလည်း ဟိုလူပဲ သတ်သလိုလို ဒီလူကပဲ သတ်သလိုလိုတွေပြသွားတာမို့လို့ပါပဲ။ လာပါပြီ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ကိုယ်ထင်နေသလိုသာ ပြသွားမယ်ဆိုရင် ဇာတ်သိမ်းကတော်တော်လှမှာ ဖြစ်ပေမယ့် မထင်မှတ်တဲ့သူကို သူသတ်သမား ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာက Plot hole ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။
ချန်ထားခဲ့တဲ့ Plots တွေလည်းအများကြီးကျန်ခဲ့သလိုပဲ ကိုက်ညီမှုမရှိတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒါကတော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူသတ်သမားရဲ့ Intentions ကိုလည်း အပြည့်အစုံချပြသွားတာမရှိသလို ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း မပြသွားတာ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။
၂၀၂၁ ရဲ့ ကြည့်ခဲ့ဖူးသမျှဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဇာတ်သိမ်းအဆိုးဆုံးကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အက်လီဆင်ရဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့မှူအကြောင်းကတော့ ပြောစရာကိုမလိုပါဘူး။ အကုန်အမှားတွေချည့်ပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းအစကနေ ဇာတ်သိမ်းနားအထိ ကောင်းအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်သိမ်းကတော့ Plot Hole တွေအများကြီးနဲ့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောပါရစေ။ ကျန်တာ Production နဲ့ Scenes တွေကတော့ Low Budgets နဲ့မတူပဲ အဆင်မြင့်မြင့် ရိုက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Casts တွေကလည်း တကယ့်နာမည်ကြီးပြီးသား လူငယ်သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားတာမလို့ Acting ပိုင်းကတော့ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ အပြာခန်းတွေအများကြီးထည့်တာ နဲ့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြထားတာတွေကတော့ 20s Teenage Films ပုံစံမျိုးဖန်တီးထားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အကျဥ်းချုပ်ပြောရရင် ဇာတ်သိမ်းကလွဲလို့ ကျန်တာအကုန် ကြည့်ကောင်းတယ်။ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ IMDb 5.3 နဲ့ Rotten Tomatoes 40% ရထားပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ 5.7 လောက်အထိပေးချင်ပါတယ်။ Ashley Moore နဲ့ Jumanji မင်းသမီး Madison Iseman ရဲ့ မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပေါ့။
သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်ရတဲ့အပြင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လူကြီးကြည့်ခန်း များများပါတဲ့အတွက် ကြည့်ချင်သူများကြည့်ဖို့အတွက် အညွှန်းရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
2D World ထဲမှာချခဲ့ကြတဲ့ Miles Morales နဲ့ SpiderMan 2099
No Comments on 2D World ထဲမှာချခဲ့ကြတဲ့ Miles Morales နဲ့ SpiderMan 2099
Spider-Man Across The Spider-Verse teaser trailerဟာ ယနေ့မှာထှကျရှိလာခဲ့ပါတယျ.
Teaser trailerအတှငျးမှာဆိုရငျလညျး titleနဲ့လိုကျအောငျပငျ Dimensionတှကေိုဖွတျသနျးသှားလာပွီး တိုကျခိုကျနကွေပုံတှကေိုလညျးတှေ့ခဲ့ရပါတယျ.
ဒီpostမှာပွောပွသှားမဲ့အရာကတော့ trailerအတှငျးမှာတှေ့ခဲ့ရတဲ့ Milesနဲ့2099တို့တိုကျခိုကျနခေဲ့ကွတဲ့နရောဖွဈတဲ့2Dimensional Worldအကွောငျးဖွဈပါတယျ.
Trailerရဲ့အစပိုငျးမှာဆိုရငျ Miles Moralesစီ Gwen Stacyက portalတဈခုဖှငျ့ပွီးရောကျရှိလာခဲ့တာကိုမွငျခဲ့ရပါတယျ. ပထမ Spider-Man Into The Spider-Verseနဲ့မတူညီတဲ့အခကြျကတော့ trailerအရဆိုရငျ ဒီAcross The Spider-Verse movieမှာတော့ Gwenက watchတဈခုကိုအသုံးပွုပွီး Milesရဲ့Realityကိုရောကျရှိလာခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ.
Comicအရဆိုရငျတော့ Gwen Stacyစီမှာတှေ့ရတဲ့watchက Dimensional Travel Watchလို့အမညျရပါတယျ. ဒီDimensional Travel Watchကို Earth 50101က Spider-Man (Pavitr Prabhakar)က တီထှငျခဲ့တာပါ. ဒီWatchကွောငျ့ပဲ တဈခွားRealityတှေ Earthတှေ Dimensionတှကေိုဖွတျသနျးသှားလာနိုငျကွတယျလို့ယူဆပါတယျ.
Across The Spider-Verse animated movieမှာတော့ ဒီWatchရဲ့Originကဘယျလိုလာမလဲဆိုတာကိုတော့movieထှကျလာမှပဲသခြောသိရမှာပါ.
Miles Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့fight sceneမှာဆိုရငျလညျး Spider-Man 2099စီမှာ Watchတဈခုကိုမွငျတှေ့ခဲ့ရပါတယျ.comicအရဆိုရငျတော့ ဒီWatchတှကွေောငျ့ပဲSpider-Gwen, Miles Moralesတို့ Spider-Man 2099တို့ဟာ Dimensionတှကေိုကူးသနျးသှားလာနိုငျကွတာဖွဈပါတယျ.
Across The Spider-Verseမှာသူတို့Dimensionတှကေိုဘယျလိုဖွတျသနျးသှားလာကွမလဲ ရှငျးပွပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ postရဲ့လိုရငျးဖွဈတဲ့ Mile Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့ Battle sceneမှာမွငျတှေ့ခဲ့ရတဲ့2dimensional worldအကွောငျးကိုဆကျလကျပွီးပွောပွပေးသှားပါမယျ.
Dimensional Travel Watchကိုcomic refrenceယူထားသလို trailerအတှငျးမွငျတှေ့ခဲ့ရတဲ့2Dimensional Worldဟာလညျးပဲ Spider-Man comicအတှငျးမှပဲ refrenceယူထားတာဖွဈပါတယျ.
Dimensional Travel Watchကို Spider-Man(Pavitr Prabhakar)က တီထှငျခဲ့တာဖွဈပွီး Web Warriors 2015 comicမှာစတငျပါလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ.ဒီcomicအတှငျးမှာပဲ Different realityက Spider-Manတှစေုံတှေ့ခဲ့ကွပွီး Web-Warriors teamကိုဖှဲ့စညျးခဲ့ကွပါတယျ.ဒီcomicအတှငျးမှာပဲ Web-Warriors teamက Dimensional Travel Watchကိုအသုံးပွုပွီး different realityက Spider-Man villainတှကေိုလိုကျရှငျးရငျးနဲ့မှပဲ2Dimensional Worldထဲကို ရောကျခဲ့ရတာကိုပါမွငျတှေ့ခဲ့ရပါတယျ.
Trailerထဲမှာမွငျတှေ့ခဲ့ရတဲ့2Dimensional Worldဟာcomicထဲမှာလညျးတညျရှိနတောဖွဈပွီး Across The Spider-Verse animated movieဟာ Web-Warrior comicကိုrefrenceမြားစှာယူထားတယျလို့မွငျမိပါတယျ.
comicအတှငျးမှာတော့2Dimensional Worldဟာထငျတာထကျပိုရှုပျပါတယျ. comicတှဟော 2Dအဖွဈရေးဆှဲပုံဖောျထားကွတယျ,ကြှနျတောျတို့တဈကယျ့ပွငျပလူတှရေဲ့အမွငျမှာ2Dတှဖွေဈနတေယျဆိုပမေဲ့လညျး သူတို့comic worldအတှငျးမှာပဲ အလြားအနံသာရှိတဲ့ ပွငျညီ2Dimensional Worldတှရှေိနသေေးတာကိုဆိုလိုပါတယျ.
Web-Warriors comicအရဆိုရငျတော့ Different realityတှကေSpider-Manတှဟော Dimensional Travel Watchကိုအသုံးပွုပွီး2Dimensional World ကိုအလှယျတကူaccessပွုလုပျခဲ့တာကိုမွငျတှေ့ရပါတယျ.ဒါဟာလညျးဒီwatchရဲ့ abilityအရမျးကောငျးလှနျးလို့ထငျပါတယျ.
အစောပိုငျးMarvel Comicတှအေရဆိုရငျ2Dimensional World ကိုaccessပွုလုပျနိုငျတာက Nexus Of All Realitiesလို့ခေါျတဲ့ နရောတဈခုသာရှိခဲ့ပါတယျ. ဒီNexus Of All Realities ဆိုတာဟာ Multiverse, Alternate Reality, Dimension, planeတှအေကုနျလုံးကိုခြိတျဆကျထားတဲ့ ကွားခံနယျမွေ inter-dimensionတဈခုဖွဈပါတယျ.
ဒီNexus Of All Realities Dimension ကနေ အထကျကပွောခဲ့တဲ့ Multiverse တှေ,Different Universe တှေ, တဈခွား Dimension တှေ ကွိုကျတဲ့နရောကိုကွိုကျသလိုဝငျထှကျလို့ရပါတယျ.
Comic ထဲမှာဖောျပွခကြျအရဆိုရငျ Nexus Of All Realities ကွောငျ့ Marvel Universe အတှငျးမှာ2Dimensional world တငျမကပဲ marvel universe နဲ့ဘာမှကိုမဆိုငျတဲ့universeတှေ, multiverse တှဟော possibilities ပေါငျးစုံနဲ့ အဆုံးအစမရှိပဲ infinite ဖွဈနတောကို သိရှိနိုငျပါတယျ.
ဒီ Nexus Of All Realityကို Living Tribunal လို Cosmic Entiry တှနေဲ့ အစှမျးအစအလှနျကွီးမားသူတှသော access ပွုလုပျနိုငျပါတယျ. တဈကယျတော့ Nexus Of All Realities ကို ကြှနျတောျတို့အားလုံးလိုလိုရငျးရငျးနှီးနှီးမွငျတှေ့ခဲ့ကွပွီးဖွဈပါတယျ.
ဘာကွောငျ့ဆို Nexus Of All Realitiesဟာ Disney plusရဲ့ What If seriesမှာပါဝငျလာခဲ့ပွီးပွီဖွဈလို့ပါ.
ဟုတျပါတယျဗြ.What If seriesမှာ UATU The Watcherကွီးတညျရှိနတေဲ့နရောက Nexus Of All Realities Dimensionဖွဈပါတယျ.
ဒီDimension ကနပေဲ မတူညီတဲ့ဖွဈရပျတှနေဲ့ Multiverse ပေါငျးစုံက What If event တှကေိုထိုငျကွညျ့နခေဲ့တာဖွဈပါတယျ. ဒီ Dimension ကွောငျ့ပဲ Reality ပေါငျးစုံကိုမွငျတှေ့နိုငျခဲ့တာပေါ့. အဲ့ Dimension ကိုပဲ Infinity Stone တှရေဲ့အစှမျးကွောငျ့သတိထားမိခဲ့တဲ့ Ultron က access ပွုလုပျနိုငျခဲ့တယျ. Ultron နဲ့ UATU တို့ Battle ဖွဈခဲ့ကွပွီး Multiverse ရဲ့အကာအရံတှပေါကြိုးပေါကျခဲ့ပွီး reality ပေါငျးစုံဖွတျသနျးတိုကျခိုကျကွတာကိုမွငျတှေ့ခဲ့ရပါတယျ.
ယနေ့ထှကျရှိလာခဲ့တဲ့ Spider-Man Across The Spider-Verse first look teaser trailerမှ Mile Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့ Dimensional fight sceneဟာလညျး What Ifက UATU နဲ့ Ultron တို့ရဲ့battle ကို ပွနျလညျအမှတျရစပေါတယျ.
Nexus Of All Realities နဲ့ခြိတျဆကျမှုရှိမယျလို့တော့မထငျမိဘူးဗြ. တူညီတဲ့ concept တဈမြိုးမြိုးနဲ့မွငျတှေ့နိုငျမယျလို့တော့ထငျမိပါတယျ.
Spider-Man Across The Spider-Verse first look teaser trailerမှာမွငျတှေ့ခဲ့ရတဲ့ Miles Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့battleအတှငျးမွငျတှေ့ခဲ့ရတဲ့2Dimensionalအကွောငျးကို comicနဲ့ဆကျစပျပွီး ရှငျူပွပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ.အတုံးထိဖတျပေးခဲ့လို့ ကြေးဇူးပါ.
Spider-Man Across The Spider-Verse teaser trailerဟာ ယနေ့မှာထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်.
Teaser trailerအတွင်းမှာဆိုရင်လည်း titleနဲ့လိုက်အောင်ပင် Dimensionတွေကိုဖြတ်သန်းသွားလာပြီး တိုက်ခိုက်နေကြပုံတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်.
ဒီpostမှာပြောပြသွားမဲ့အရာကတော့ trailerအတွင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Milesနဲ့2099တို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့2Dimensional Worldအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်.
Trailerရဲ့အစပိုင်းမှာဆိုရင် Miles Moralesစီ Gwen Stacyက portalတစ်ခုဖွင့်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်. ပထမ Spider-Man Into The Spider-Verseနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကတော့ trailerအရဆိုရင် ဒီAcross The Spider-Verse movieမှာတော့ Gwenက watchတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီး Milesရဲ့Realityကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ.
Comicအရဆိုရင်တော့ Gwen Stacyစီမှာတွေ့ရတဲ့watchက Dimensional Travel Watchလို့အမည်ရပါတယ်. ဒီDimensional Travel Watchကို Earth 50101က Spider-Man (Pavitr Prabhakar)က တီထွင်ခဲ့တာပါ. ဒီWatchကြောင့်ပဲ တစ်ခြားRealityတွေ Earthတွေ Dimensionတွေကိုဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ကြတယ်လို့ယူဆပါတယ်.
Across The Spider-Verse animated movieမှာတော့ ဒီWatchရဲ့Originကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုတော့movieထွက်လာမှပဲသေချာသိရမှာပါ.
Miles Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့fight sceneမှာဆိုရင်လည်း Spider-Man 2099စီမှာ Watchတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်.comicအရဆိုရင်တော့ ဒီWatchတွေကြောင့်ပဲSpider-Gwen, Miles Moralesတို့ Spider-Man 2099တို့ဟာ Dimensionတွေကိုကူးသန်းသွားလာနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်.
Across The Spider-Verseမှာသူတို့Dimensionတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားလာကြမလဲ ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ postရဲ့လိုရင်းဖြစ်တဲ့ Mile Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့ Battle sceneမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့2dimensional worldအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်.
Dimensional Travel Watchကိုcomic refrenceယူထားသလို trailerအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့2Dimensional Worldဟာလည်းပဲ Spider-Man comicအတွင်းမှပဲ refrenceယူထားတာဖြစ်ပါတယ်.
Dimensional Travel Watchကို Spider-Man(Pavitr Prabhakar)က တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Web Warriors 2015 comicမှာစတင်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.ဒီcomicအတွင်းမှာပဲ Different realityက Spider-Manတွေစုံတွေ့ခဲ့ကြပြီး Web-Warriors teamကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်.ဒီcomicအတွင်းမှာပဲ Web-Warriors teamက Dimensional Travel Watchကိုအသုံးပြုပြီး different realityက Spider-Man villainတွေကိုလိုက်ရှင်းရင်းနဲ့မှပဲ2Dimensional Worldထဲကို ရောက်ခဲ့ရတာကိုပါမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်.
Trailerထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့2Dimensional Worldဟာcomicထဲမှာလည်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး Across The Spider-Verse animated movieဟာ Web-Warrior comicကိုrefrenceများစွာယူထားတယ်လို့မြင်မိပါတယ်.
comicအတွင်းမှာတော့2Dimensional Worldဟာထင်တာထက်ပိုရှုပ်ပါတယ်. comicတွေဟာ 2Dအဖြစ်ရေးဆွဲပုံဖော်ထားကြတယ်,ကျွန်တော်တို့တစ်ကယ့်ပြင်ပလူတွေရဲ့အမြင်မှာ2Dတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း သူတို့comic worldအတွင်းမှာပဲ အလျားအနံသာရှိတဲ့ ပြင်ညီ2Dimensional Worldတွေရှိနေသေးတာကိုဆိုလိုပါတယ်.
Web-Warriors comicအရဆိုရင်တော့ Different realityတွေကSpider-Manတွေဟာ Dimensional Travel Watchကိုအသုံးပြုပြီး2Dimensional World ကိုအလွယ်တကူaccessပြုလုပ်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်.ဒါဟာလည်းဒီwatchရဲ့ abilityအရမ်းကောင်းလွန်းလို့ထင်ပါတယ်.
အစောပိုင်းMarvel Comicတွေအရဆိုရင်2Dimensional World ကိုaccessပြုလုပ်နိုင်တာက Nexus Of All Realitiesလို့ခေါ်တဲ့ နေရာတစ်ခုသာရှိခဲ့ပါတယ်. ဒီNexus Of All Realities ဆိုတာဟာ Multiverse, Alternate Reality, Dimension, planeတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကြားခံနယ်မြေ inter-dimensionတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.
ဒီNexus Of All Realities Dimension ကနေ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ Multiverse တွေ,Different Universe တွေ, တစ်ခြား Dimension တွေ ကြိုက်တဲ့နေရာကိုကြိုက်သလိုဝင်ထွက်လို့ရပါတယ်.
Comic ထဲမှာဖော်ပြချက်အရဆိုရင် Nexus Of All Realities ကြောင့် Marvel Universe အတွင်းမှာ2Dimensional world တင်မကပဲ marvel universe နဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်တဲ့universeတွေ, multiverse တွေဟာ possibilities ပေါင်းစုံနဲ့ အဆုံးအစမရှိပဲ infinite ဖြစ်နေတာကို သိရှိနိုင်ပါတယ်.
ဒီ Nexus Of All Realityကို Living Tribunal လို Cosmic Entiry တွေနဲ့ အစွမ်းအစအလွန်ကြီးမားသူတွေသာ access ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်. တစ်ကယ်တော့ Nexus Of All Realities ကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလိုရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်.
ဘာကြောင့်ဆို Nexus Of All Realitiesဟာ Disney plusရဲ့ What If seriesမှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ပါ.
ဟုတ်ပါတယ်ဗျ.What If seriesမှာ UATU The Watcherကြီးတည်ရှိနေတဲ့နေရာက Nexus Of All Realities Dimensionဖြစ်ပါတယ်.
ဒီDimension ကနေပဲ မတူညီတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ Multiverse ပေါင်းစုံက What If event တွေကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. ဒီ Dimension ကြောင့်ပဲ Reality ပေါင်းစုံကိုမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့တာပေါ့. အဲ့ Dimension ကိုပဲ Infinity Stone တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့်သတိထားမိခဲ့တဲ့ Ultron က access ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်. Ultron နဲ့ UATU တို့ Battle ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး Multiverse ရဲ့အကာအရံတွေပါကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီး reality ပေါင်းစုံဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်ကြတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်.
ယနေ့ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Spider-Man Across The Spider-Verse first look teaser trailerမှ Mile Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့ Dimensional fight sceneဟာလည်း What Ifက UATU နဲ့ Ultron တို့ရဲ့battle ကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေပါတယ်.
Nexus Of All Realities နဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိမယ်လို့တော့မထင်မိဘူးဗျ. တူညီတဲ့ concept တစ်မျိုးမျိုးနဲ့မြင်တွေ့နိုင်မယ်လို့တော့ထင်မိပါတယ်.
Spider-Man Across The Spider-Verse first look teaser trailerမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Miles Moralesနဲ့ Spider-Man 2099တို့ရဲ့battleအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့2Dimensionalအကြောင်းကို comicနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ရှင်ူပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.အတုံးထိဖတ်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါ.